Millennium Ginkgo Valley Happiness Station
Igumbi lakho lokulala e i-kezhan sinombuki zindwendwe ongu用户1010
Intendelezo encinci yayisanda kwakhiwa ngo-2015, kwaye umhombiso ushushu kwaye ucocekile; inendawo yokuhlala eyomeleleyo kunye nomthamo wokwamkela, kwaye inokwamkela abantu abangama-30+ ngaxeshanye. Kukho imigangatho emithathu kunye namagumbi eendwendwe ali-10. Phakathi kwazo, kukho amagumbi amabini osapho (ababini), amagumbi ama-4 anebhedi ezimbini, amagumbi ama-3 aneebhedi ezimbini, kunye negumbi elineebhedi ezininzi. Indawo yokuhlala izolile kwaye ikhululekile, kukho iishawa ezishushu ezifumaneka imini yonke.
Intendelezo encinci inendawo yokupaka ezimeleyo, enokupaka iimoto ezili-15 + ngexesha elinye.
Intendelezo encinci inomthamo oqinileyo wokwamkela ukutya kwaye inokwamkela abantu abangama-60+ ngaxeshanye. Intendelezo encinci ibonelela ngeentlobo ngeentlobo zokutya kwasefama kunye neempawu, njengesuphu yenkukhu, iisoseji, njl.njl., ukulungiselela ezona zithako ziyinyani kuye wonke umntu, kwaye uzipheke ngeyona ndlela iyinyani yokuqinisekisa ukuba wonke umntu wanelisekile. Ewe, abakhenkethi abathanda imifuno eluhlaza abanakuphoswa yile ndawo.Zonke iintlobo zemifuno emitsha ezikhule ngokwazo ziswiti kwaye ziswiti ngaphandle kwazo naziphi na izongezo.Abakhenkethi abanomdla banokuya kwigadi yemifuno ukuyikha nomniniyo.Izithako ezikhethwe ngokwazo ngokuqinisekileyo zodwa.
IHappiness Inn ikwiNombolo 41 yeMillennium Ginkgo Valley Scenic Area eSuizhou Yindawo yokuhlala ezimeleyo enemigangatho emibini enendawo ebalaseleyo yejografi kunye nendawo yokupaka efanelekileyo. IHappiness Inn yindibaniselwano yokutya nendawo yokuhlala, inamagumbi ali-10, amagumbi ayi-6 anebhedi ephindwe kabini, amagumbi amawele ama-3, kunye negumbi eli-1 elinebhedi ezintathu, elinokuhlalisa indawo yokuhlala yeqela.
Ukusukela ngo-Okthobha ukuya kuNovemba minyaka le, iGingo Valley Scenic Area igcwele isikrweqe segolide.
Umbuki zindwendwe ngu- 用户1010
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Suizhou